Special Europe Pro | GO & GO Travels
12 D / 11 N ( France–Switzerland – Italy )
Day 1 :Arrival Day In Paris ( ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည့်နေ့)
ရန်ကုန်မြို့မှ ထိုင်းအဲဝေးလေကြောင်းဖြင့် ( ဝ၉း၅ဝ )တွင်ထွက်ခွါပါမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သုဝဏ္ဏဘုံမိလေဆိပ်သို့ (၁၁း၄၅ ) တွင်ရောက်ပါမည်။ ထိုလေဆိပ်မှ ( ၁၂း၎ဝ )တွင်ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီမြို့လေဆိပ်သို့ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ (၁၉း၎ဝ) တွင်ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ပြီးလျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ပေး၍ ဟိုတယ်ဝင်ခွင် ပြုလုပ်ပေးနေစဉ်ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမ၌ခေတ္တအနားယူနိုင်ပါသည်။ ၄င်းနောက် မိမိအခန်းများ အတွင်းသို့မိမိတို့ ၏ ပစ္စည်းများ ကိုနေရာချပြီး၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Alliance Porte De St Queen Hotel.**** or Similar
Day2:Paris Full Day Tour (B/ L / D )( ပါရီမြို့လည်ပတ်သည့်နေ့)
Day 3: Paris – Versailles - Paris ( B / L / D ) (ပါရီမြို့- ဗာဆလီ - ပါရီလည်ပတ်သည့်နေ့)
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ( ဝ၉းဝဝ ) အချိန်ခန့်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ နပိုလီယမ်နန်းတော်ရှိရာဗာဆလီသို့ထွက်ခွါပါမည်။ ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောစစ်ဘုရင်စံမြန်းခဲ့ရာကြီးကျယ်ခန်းနား လှပလွန်း သာမက၊ ဖက်ရှင်ခေတ်ဦးဟုဆိုရမလောက်ဖြစ်သော သမိုင်းဝင် နန်းတော်ကြီးကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ပြတိုက်အဖြစ်ပြသထား သော၊ နပိုလီယမ်နန်းတော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားနိုင်ပါသည်။ ၄င်းနောက် နေ့လည်စာကိုဗာစလီရှိ Au Mandarin Royal စားသောက်ဆိုင်တွင် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပြီးနောက်၊ ဗာစလီမှပြန်လည်ထွက်ခွါပြီး၊လွတ်လပ်စွာ ဈေးဝယ်လည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာကို Suvarnabhum Thai စားသောက်ဆိုင်တွင်ဧည့်ခံကျွှေးမွေးပါမည်။ ၄င်း နောက် ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ( ညပိုင်းတွင်ပါရီမြို့ရှိနာမည်ကျော် Lido Show ကြည့်ချင်ပါကမိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ )၊ ပါရီတွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Alliance Porte De St Queen Hotel.**** or Similar
Day4: Paris – Dijon–Lucerne ( B / L / D ) (ပါရီမြို့- ဒိုင်ဂျွန်–လူဇာန်း )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ အလည်ပိုင်းရှိပန်းချီကားအလားလှပသောမြို့ဖြစ်သည့်လူဇာန်းမြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ လူဇာန်းမြို့သို့မရောက်ခင်၊ ဒိုင်ဂျွန်မြို့တွင်နေ့လည်စာကိုသုံးဆောင်ကြပြီးဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ လူဇာန်းသို့ရောက်လျှင်ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အနားယူပါမည်။Hotel : Krone Hotel.**** or Similar
Day5:Lucerne full day sightseeing ( B / L / D ) (လူဇာန်းလည်ပတ်သည့်နေ့)
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ လှပသောလူဇာန်းမြို့ကိုစတင်လည်ပတ်ရာတွင်နာမည်ကျော်ုစေနူတံတား၊ ခြင်္သေ့အမှတ်တရကျောက်တိုင်တို့ကိုလည်ပတ်ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးနောက်၊ နာမည်ကျော်လူဇာန်းကန်ကိုသင်္ဘောဖြင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါမည်။ ပြီးနောက်နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ မွှန်းလွှဲပိုင်းတွင်လူဇာန်းမြို့ကိုဥမငနညအအေငသညွှသကမအနေဖြင့်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အနားယူပါမည်။
Hotel : Krone Hotel.**** or Similar
Day6: Lucerne–Engelberg-Mt.Titlis–Lucerne (B/L/D)( လူဇာန်း - အန်ဂျယ်ဘတ် - တိုင်လစ်တောင် - လူဇာန်း )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ( ဝ၉းဝဝ ) အချိန်ခန့်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ လူဇာန်းမြိုမှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏လှပပြီး၊ ရေခဲတောင်များထဲတွင်၊ ထင်ရှားသောနာမည်ကျော် တိုင်လစ်တောင် ရှိရာအန်ဂျယ်ဘတ် သို့ထွက်ခွါ့ပါမည်။ ရေခဲများဖုံးလွှမ်းနေသော ပေ ၁ဝဝဝဝ အမြင့်ရှိသောတောင်ကိုကေဘယ်ကားဖြင့်တက်ကြပါမည်။ အံ့မခန်းဖွယ် လှပလွန်သော ရှုခင်းများကိုကေဘယ်ပေါ်မှဖြ င်တွေ့ရမှာဖြစ်သလို ၊ရေခဲတောင်ပေါ်ကိုလည်း လမ်းလျှောက်ပြီးတက်သည့် အတွေ့အကြုံကို သင်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ နေ့လည်စာကိုတိုင်လစ်တောင်ပေါ်ရှိဏညေသမေွာျေနျအကေမညေအ တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်စာစားသုံးပြီး နောက်၊လူဇာန်းမြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ လမ်းတွင့်ဥကအူနအြေူ များသို့ လည်ပတ်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက်ဟိုတယ်သို့သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ Hotel : Krone Hotel.**** or Similar
Day7: Lucerne–Lugano–Como–Verona–Padova(B/L/D)( လူဇာန်း - လတ်ဂါနို–ကိုမို –ဗီရိုနာ - ပါဒိုဗာ)
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊အံ့သြဖွယ်ရာရှုခင်းများဖြင့်လှပနေသောAlpine Scenery, Sound the Massive St. Gotthard တောင်တန်းများထဲကိုဖြတ်ပြီးနောက်၊ရှည်လျှားသွေှာကညညနူ ကိုပါဖြတ်ပြီး၊ လှပသောလတ်ဂါနိုသို့ထွက်ခွါပါမည်။ နွေထွေးသောခံစားမှုကိုစတင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါသည်။ လတ်ဂါနိုသို့ရောက်လျှင်နာမည်ကျော်ချောကလက်စက်ရုံ သို့သွားရောက်ကာအမျိုးမျိုးသောချောကလက်များ ကိုမြည်းစမ်းရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါးချေကလက်များကို ဝယ်ယူနိုင်ရန် လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ကိုမိုတွင်နေ့လည်စာကိုသုံး ဆောင်ပြီးနောက်၊ အီတလီနှင့်ပိုတောင်ကြားများကိုဖြတ်ကာရှိတ်စပီးယား၏ ရိုမီရိုနှင့် ဂျူးလီယက်ရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်သော အလယ်ခေတ်ပုံစံဗီရိုနာမြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ ဗီရိုနာမြို့ရောက်လျှင် ဂျူးလီးယက်အိမ်ကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်ပြီး၊ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက်ဗီရိုနာမြို့မှတဆင့်ပါဒိုဗာသို့ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ ပါဒိုဗာသို့ရောက်လျှင်တဆက်တည်း ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာ ဟိုတယ်တွင်ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ Hotel : ORA Hotel SB **** or Similar
Day 8 :Padova– Venice ( B / L / D ) ( ပါဒိုဗာ – ဗင်းနစ်)
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာရေပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော၊ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်ှုအေူငညေဲသဘ ရိုက်ကူးသည့်၊ ဗင်းနစ်စ်မြို့သိုထွက်ခွါပါမည်၊ ဗင်းနစ်မြို့သို့ရောက်လျှင်၊ မော်တော်ဘုတ်ဖြင့်ထူးမြောင်းတလျှောက်လှည့်လည်ပြီး၊ ဗင်းနစ်စ်မြို၏ အံ့သြဖွယ်ရာဗိသုကာလက်ရာများဖြင့်ပြည်နှက်နေသောခွေးများနန်းတော်၊ စိန်မာ့ရင်ပြင်ကိုလည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ ၄င်းနောက် နေ့လည်စာကိုသုံး ဆောင်ပြီးနောက်ွျူျေြူသတငညါ စက်ရုံကိုသွားရောက်လေ့လာပြီးနောက်၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးဈေးဝယ်ရန်လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ညနေစာကို La RISTRORANTE SUSHI WOK MARGHERA Restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel :Move Hotel.**** or Similar
Day9:Venice - Florence ( B / L / D ) ( ဗင်းနစ်စ် -– ဖလော်ရန်စ် )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်၍ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ အီတလီနိုင်ငံ၏လည်ပတ်စရာကောင်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည့်၊ ဖလောရန့်မြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ သာယာလှပသောမြို့ ၏ ရှုခင်းများကြည့်ရှုပြီးနောက၊် ထင်ရှားသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘုရားကျောင်းနှင့် ရှေးခေတ်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးပြုလုပ်သည့် II Duomo Cathedral, Plazza di Signoria, Palazzo Vecchio and Basillica of Santa Croce သို့လေ့လာလည်ပတ်ပါမည်။ နေ့လည်စာနှင့်ညစာများကို Hong Kong restaurant နှင့် Peking restaurant နှင့်ဏနုငညါ မနျအကေမညေအ တို့တွင်သုံးဆောင်ပြီး Hotel သို့check in လုပ်ပြီး၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Wallart Hotel.( Prato )**** or Similar
Day 10 :Florence - Pisa – Siena – Rome ( B / L / D ) (ဖလော်ရန်စ် – ပီဇာ – စိုင်နာ - ရုန်း )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုပြုလုပ်ကာရောမဟုအီတလီနိုင်ငံသားများကခေါ်သောရုန်း သို့သွားရောက်ရန်ထွက်ခွါပါမည်။ ရုန်း ကိုသွားရာတွင်၊ ပီဇာနှင့်စိုင်နာမြို့မျာ ကိုဖြတ်၍ သွားမှာဖြစ်သောကြောင့် ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ပီဇာမြိုံကို Orientation Tour အနေဖြင့်လည်ပတ်ပြီး၊ နှင့်စိုင်နာမြို့တွင်နေ့လည်စာကိုသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညနေပိုင်းတွင်ရုန်းကိုရောက်ပြီး၊ ညနေစာကိုရုန်းတွင်သုံးဆောင်ပြီး နောက် ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Pisana Hotel.( Prato )**** or Similar
Day 11 :Rome full day sightseeing ( B / L / D ) (ရုန်းမြို့လည်ပတ်မှု )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ( ဝ၉းဝဝ )တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်၍ကြိုဆိုပြီးတနေ့တာလည်ပတ်မှုကိုဗာတီကန်မြို့ ဟောင်းလည်ပတ်မှုမှစတင်ပါမည်။ ၄င်းနောက် St Peter’s Basilica, St Peter Basilica3hrs whisper သို့၃ နာရီခန့်လည်ပတ်လေ့လာပြီး နောက်နေ့လည်စာစားသုံးရန်အတွက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ Zhong Yi Restaurant တွင်စီစဉ်ထားပါသည်။ နေ့ တဝက်ကို လွတ်လပ်စွာဈေးဝယ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ နှုတ်ဆက်ညစာ Ristorante Papa Restaurant တွင်ပျော်ပျော်ပါးပါးသုံးဆောင်ပြီးနောက်ခရီးစဉ်၏ နောက်ဆုံးညအဖြစ် Holiday Inn Roma Pisana ( or ) Similar တွင်အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
Day 12 : Departure Day ( B ) ( ရုန်းမြို့မှမိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွါမည့်နေ့)
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်၍ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုမပြုလုပ်မီအားလပ်အချိန်ပေးထားပါသည်။ ၄င်းနောက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်၍ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုပြုလုပ်ပေးပြီး လေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံး၍ ထိုင်းအဲယားဝေးလေယဉ်ဖြင့် မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
Program include: ( ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်အရာများ )
11 Nights Accommodation with daily breakfast at 3*~4* Hotel
10 - times Lunch and 10 - times Dinner & 11 Breakfast ( Chinese food & Thai Food & Traditional food )
Through out English Speaking Tour Directorfrom D1 in Paris & D 12 in Rome
andEnglish speaking guide for Historical Site
Beverages & Laundry service /Entrance fee and requested sightseeing program for not as itinerary
Visa fee and visa service & Personal insurance and personal uses
Grand EU3countries
Child Rate Payable : 1585 USD ( A child must be under 12 years, sharing twin room with2adults and is NOT counted as paying Pax. Children’s ages MUST be specified on the rooming list to qualify for child rates.